China ultrasonic ebalulekile uwoyela emulsifier Ukwakha kanye Factory | Precision Hangzhou
Insangu ukukhishwa (I-CBD, iTHC) angama-molecule we-hydrophobic (hhayi ancibilikayo amanzi). Ukuze unqobe ukungabibikho kwama-cannabinoid emanzini okufaka okudliwayo, iziphuzo kanye nama-cream, kudingeka indlela efanele yokufaka emulsification.
I-Ultrasonic ebalulekile i-emulsifier kawoyela ye-CBD isebenzisa amandla e-mechanical sheer force we-ultrasonic cavitation ukunciphisa usayizi we-droplet wama-cannabinoids ukukhiqiza ama-nanoparticles, azoba mancane kune 100nm. I-Ultrasonics ubuchwepheshe obusetshenziswa kabanzi embonini yezemithi yokwenza ama-nanoemulsions azinzile amanzi.
Amafutha / Amanzi we-Cannabis Emulsions - Ama-nanoemulsions angama-emulsions anesayizi encane yamaconsi anezindawo eziningana ezikhangayo zokwakhiwa kwe-cannbinioid kufaka phakathi ukucaca okuphezulu, ukuzinza kanye ne-viscosity ephansi. Futhi, ama-nanoemulsions akhiqizwa ukucutshungulwa kwe-ultrasonic adinga ukugxila okuphansi okuvumela ukunambitheka okuhle nokucaca eziphuzweni.
Uphondo lwe-Titanium alloy, amathangi engilazi.
Can ukulawula 10L ketshezi, kusuka
Can ukulawula 30L
I-JH-BL5L / 10L / 20L, fanisa ne-chiller.
I-1.Ngenxa ye-droplet ye-CBD ihlakazeke kuma-nanoparticles, ukuzinza kwama-emulsions kukhuphuke kakhulu. Ama-emulsions akhiqizwa nge-Ultrasonically avame ukuzinza ngaphandle kokufakwa kwe-emulsifier noma i-surfactant.
Okwe-oyela we-CBD, i-nano emulsification ithuthukisa ukumuncwa kwama-cannabinoids (ukutholakala kokutholakala kokutholakala kokutholakala kokungenwa) futhi ikhiqiza umphumela ojulile. Ngakho-ke imithamo yomkhiqizo we-cannabis ephansi ingafinyelela emiphumeleni efanayo.
Impilo yemishini yethu ingaphezu kwamahora angama-20 000 futhi ingasebenza ngokuqhubekayo amahora angama-24 ngosuku.
Ukulawulwa okuhlanganisiwe, ukuqala kokhiye owodwa, ukusebenza okulula. Ingaxhunyaniswa ne-PLC.
Langaphambilini 20Khz umshini wokusabalalisa we-homoegnizer we-ultrasonic
Olandelayo: umshini we-ultrasonic plant pigments umshini wokukhipha i-pectin
imishini ye-ultrasonic CBD emulsification kawoyela
ultrasonic insangu kawoyela emulsification yedivayisi f ...
umshini we-ultrasonic nano CBD emulsification kawoyela